(2021) Otu esi eweghachi iPad na Ntọala Factory na-enweghị Paswọdu / iTunes / Passcode
Emelitere ikpeazụ na Disemba 8, 2020 nke Ian McEwan dere
Eleghị anya ị bụ onye uche adịghị n'ụdị na-enwe mmasị ichefu paswọọdụ / paswọọdụ mgbe ịchọrọ tọgharịa iPad na ntọala ụlọ ọrụ, n'ihi na gị na iPad bụ rapaara na mgbake mode, ma ọ bụ na ị chọrọ weghachite nkwado ndabere na mpaghara iCloud / iTunes, ma ọ bụ na ị chọrọ hichapụ ya tupu ị resị iPad ahụ ejirila rụọ ọrụ, ọbụna ruo kpochapụ cache iji mee ka nchekwa ebe nchekwa dịkwuo elu. Echegbula. Nke a bụ ụzọ ụfọdụ banyere otu esi edochi iPad enweghị Apple ID paswọọdụ (AKA iCloud Paswọdu), passcode na ọbụlagodi iTunes.
Usoro 1: Otu esi eweghachi iPad na Ntọala Factory na-enweghị iTunes
2 usoro: IPetịgharịa nrụpụta iPad na-enweghị Paswọdu (iCloud Password / Apple ID Paswọdu)
3 usoro: IPetịgharịa iPad na-enweghị passcode
4 Method: Otu esi eweghachi iPad enweghị passcode ya na ịchọta ekwentị m
Usoro 5: Otu esi eweghachi iPad enweghị paswọọdụ ya na iTunes
Usoro 6: Otu esi eweghachi iPad enweghị paswọọdụ ya na kọmpụta tụkwasịrị obi
Usoro 7: Otu esi eweghachi iPad na ndabara
Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeghe iPad gị ma chọọ ịtọgharịa ya, enyemaka nke iOS Sistem Iweghachite ga enyere gi aka zuru oke. Dakọtara na ụdị iOS niile, o nwere ngwa desktọpụ maka Mac na Windows. E wezụga tọgharịa ngwaọrụ gị, ọ na-enyekwa aka idozi ụfọdụ nsogbu dị ka reboot loop, na-acha ọcha ọcha nke ọnwụ, na ndị ọzọ. Biko soro usoro ndị a ma mụta otu esi edochi iPad na enweghị paswọọdụ:
Kwụpụ 1: Wụnye iOS System Recovery - budata (Pịa na Free Download taa) ma bido imegharị iPad na-enweghị paswọọdụ gị. Pịa “iOS Sistem Iweghachite"Nhọrọ na isi ihuenyo.
Kwụpụ 2: Ugbu a jikọọ iPad na kọmputa gị na eriri USB wee pịa “Malite"Bọtịnụ.
Kwụpụ 3: Mgbe ịmata ngwaọrụ gị, a ga-enwe a mmapụta window-arịọ gị ka “Tụkwasịnụ Kọmputa a”Na ihuenyo nke ngwaọrụ gị.
Kwụpụ 4: Na windo ọzọ, ekwesịrị ị mejupụta ozi ụfọdụ gbasara ngwaọrụ gị. Wee pịa “mmeziPịa bọtịnụ ka emelitere firmware.
Kwụpụ 5: Mgbe nbudata ahụ mechara, pịa “Mezie Ugbu a”Bọtịnụ. Na mgbakwunye, ị nwere ike uncheck “Weghachite data obodo”Iji mee ka usoro ihe ndozi ahụ rụpụta nke ọma.
Kwụpụ 6: Ugbu a na-abịa usoro anwansi iji tọgharịa iPad gị na-enweghị paswọọdụ, naanị nye koodu nkwenye.
Kwụpụ 7: Ọ ga-ewe oge iji degharịa ngwaọrụ gị ma hichapụ data. N’ikpeazụ, iPad gị ga-amalitegharị wee mechaa nweta ya n’etinyeghị ikike paswọọdụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-echeta gị Apple ID paswọọdụ / iCloud Paswọdu ma ọ bụ zụta ngwaọrụ eji nke bụ Apple ID akpọchiri, ma chọọ ihichapụ iPad, ịnwere ike iji iPad Unlocker wepu Apple ID na iPad na-enweghị paswọọdụ wee malitegharịa iPad na ntọala ụlọ ọrụ.
Nke a bụ otú factory tọgharịa iPad enweghị iCloud paswọọdụ. Biko soro ntuziaka n'okpuru nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Kwụpụ 1: Run Run Unlocker na kọmputa gị ma jiri eriri USB jikọta iPad gị na PC.
Nzọụkwụ 2: Pịa na 'Unlock Apple ID' modul na mmemme mmemme wee pịa bọtịnụ 'Malite ịkpọghe'. Nọgidenụ na-iPad ejikọrọ n'oge usoro na Lockwiper ga-ewepụ Apple ID gị iPad na a nkeji ole na ole.
Mgbe wepụ Apple ID gị iPad, ị nwere ike ịgbanwee gaa na a dị iche iche Apple ID ma ọ bụ mepụta ọhụrụ. I nwekwara ike imelite ọhụrụ iOS version eriri na-enweghị adịkwa gị ọhụrụ enwetara Apple ID. Agaghị egbochi ngwa ngwa iPad ma ọ bụrụ na onye ọrụ Apple ID ga-egbochi ya.
Nzọụkwụ 3: Tọgharia iPad enweghị iTunes. Na iPad gị, gaa na 'Setting'> 'General'> pịgharịa gaa na ala wee pịa 'Tọgharia'> 'Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala'. I meela ihe niile. I nwekwara ike ndabere iPad gị Tupu ịmalitegharị ya.
Unlocker iPad Ugbu a
Mgbe ụfọdụ, gị iPad ego n'anya ekpochi mgbe abanye na-ezighị ezi passcode n'ihi na ihe karịrị 6 ugboro, ma ọ bụ na ị dị n'ụzọ ụfọdụ echefu passcode. “Ya mere. Olee otú m factory tọgharịa m iPad enweghị passcode? ” I nwere ike ịjụ. Echegbula. Ka nwere ike tọgharịa iPad mkpọchi akpọchiri LockWiper akpọtụrụ n’elu.
E wezụga 'Unlock Apple ID', LockWiper nwekwara ike wepu koodu 4-nọmba / 6digit, ID Touch, ID ID, koodu ọnụọgụ omenala. wdg.
Nke a bụ otu esi ehichapụ iPad enweghị passcode:
Nzọụkwụ 1: Gbaa iPhone unclocker na Pịa na 'Malite' button na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Jiri eriri USB jikọta iPad gị na PC ma soro ntuziaka ahụ tinye iPad gị n’ime DFU Mode or Ọnọdụ Iweghachite.
Kwụ na Confkwụ 3: Kwenye ngwaọrụ ozi ke interface wee pịa 'Download' ibudata femụwe gị pc.
Nzọụkwụ 4: Pịa 'Malite iji nyochaa' mgbe femụwe na-ebudatara na pịa 'Malite Unlock' na-amalite to kpọghee ekwt gị iPad.
Kwụ na 5kwụ 000000: Tinye nọmba 'XNUMX' na usoro ihe omume windo okpukpu abụọ akwado akpọchi, pịa ”Kpọghe’ na-eche ruo mgbe passcode gị iPad ehichapụ.
Nzọụkwụ 6: Tọgharia iPad na ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na ịga na 'Setting' On your iPad> 'General'> pịgharịa gaa na ala na enweta 'Tọgharia'> 'Ichicha All Content na Mwube'. I meela ihe niile. Iji debe data na iPad gị, ị ga - aka mma ndabere iPad gị Tupu ịmalitegharị ya.
E wezụga iOS System Recovery, ị nwere ike ịtụle ụfọdụ ndị ọzọ uzo ọma. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ gọọmentị Apple Chọta My iPhone bụ ezigbo nhọrọ iji tọgharịa iPad gị. Usoro ahụ dị iji tọgharịa iPad enweghị passcode remotely gị. Soro usoro ndị a ma mụta otu esi edochi iPad na-enweghị passcode:
Kwụpụ 1: gaa Weebụsaịtị gọọmentị iCloud ma gaa na ya "Chọta iPhone" ngalaba. Pịa “Ngwaọrụ niileOption ah ụ ma chọta iPad ịchọrọ ịtọgharịa.
Kwụpụ 2: Lee nhọrọ dịgasị iche metụtara iPad gị. Họrọ “Ihichapu iPad”Ma gosipụta nke ị họọrọ. ị nwere ike ịtọgharịa iPad na-enweghị passcode.
Agbanyeghị, iji iTunes bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji degharịa iPad na-enweghị paswọọdụ gị. E wezụga na-ege egwu kachasị amasị gị, enwere ike iji iTunes maka ịkwado ma ọ bụ weghachi iPad gị. Tupu ijikọ na iTunes, ịkwesịrị ịtọ iPad na ọnọdụ mgbake gị. Soro ntuziaka a ma mụta otu esi edochi iPad na enweghị paswọọdụ:
Kwụpụ 1: Ẹkedori mbiet iTunes emi ẹtienede mi ke editịm ndien nyịp USB m̀m or ke urụk ukopikọ ke utịt efen (yiap utịt efen).
Kwụpụ 2: Jide bọtịnụ Home na iPad gị ma jikọọ ya na sistemụ gị. Nọgide na-pịa bọtịnụ Home mgbe ị na-ejikọ ya na PC ma ọ bụ Mac gị ruo mgbe ị nwetara akara iTunes na ihuenyo.
Kwụpụ 3: Mgbe ahụ iTunes ga-achọpụta ngwaọrụ gị ozugbo na ntabi anya ndị a. Pịa “Weghachi” bọtịnụ.
Ngwọta Ọzọ: Otu esi eweghachi iPad n’enweghị iTunes.
Ọ bụghị ndị ọrụ iPad niile maara na ọ bụrụ na iPads ha jikọọ na kọmpụta ndị ha tụkwasịrị obi, ha nwere ike ịtọgharịa iPad enweghị paswọọdụ. Soro usoro ndị a ma mụta otu esi edochi iPad enweghị paswọọdụ kọmputa nwere ntụkwasị obi:
Kwụpụ 1: Jikọọ iPad na kọmputa gị tụkwasịrị obi wee malite iTunes. Gaa na “Summary”Peeji nke na iTunes. Chọọ na pịa “Weghachi ndabereBọtịnụ akụkụ Backups.
Kwụpụ 2: Nke a na-esote ozi mmapụta. Pịa “weghachi”Bọtịnụ na ngwaọrụ gị ga-eweghachi.
Ọzọkwa, enwere ike iji ya weghachi ndabere gị.
Ọ bụrụ na nke abụọ na-esote ịchọrọ ịmụta otu esi agbake data iPad na iTunes mgbe nrụpụta nrụpụta ， biko tụgharịa Otu esi eweghachite data iPhone furu efu.
Y’oburu na iputa gi na iPad, inwere ike tọgharịa iPad gị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nhọrọ ejiri arụ ọrụ. Pịa ka ịmụtakwuo
Etu esi Etu M / iPhone / iPad Na Ihe M Kwesịrị Ime Tupu Ree
Etu esi emeghachite iPhone
Etu aga-esi weghachite iPhone akpọchiri
Ọnọdụ iPad DFU iPad: Lee nkọwa niile I Kwesịrị Knowmara
Etu aga-esi weghachi iPad na Ntọala Factory
Idozi njehie iPhone & iOS
Tọgharia nrụpụta iPhone
Tọgharia akpọchiri iPhone
iPhone Adaba na Mmiri
Weghachi iPhone nwere nkwarụ
Dochie ihuenyo iPhone
Idozi iPhone White ihuenyo
Chọta iPhone echefuola
Weghachi iPad na Ntọala ụlọ ọrụ
Idozi njehie iOS
iPhone Stuck na Iweghachite na ọnọdụ
iPhone Nọgidenụ Tinye
Gbanyụọ nyocha nke 2-Factor
Tụkwasịnụ Kọmputa a
Idozi "iTunes enweghị ike ijikọ na iPhone a, Uru na-efu"
Idozi "iTunes enweghị ike ijikọ na iPhone Ejiri ya passcode"